Waraka Dalka — Dawan News
Berbera (Dawan)- Madaxweynaha jamhuuriyaddda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo, ayaa safar shaqo ku gaadhay magaalo madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, waxaana halkaas ku soo dhaweeyey shacabka ku dhaqan magaalada Berbera iyo nawaaxigeeda. 5 total views, 5 views today
Hargaysa (Dawan)- Wasiirka cusub ee wasaarada horumarinta maaliyada Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire ayaa si rasmiya...
Hargeysa (Dawan)- Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa golaha ammaanka ee qarammada midoobay ku bogaadisey qaraarkii...
Hargaysa (Dawan): Wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa shalay qaabilay wefti balaadhan...
November 19, 2018, 6:55 am
Hargaysa (Dawan)- Wasiirka cusub ee wasaarada horumarinta maaliyada Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire ayaa si rasmiya xilkii ugala wareegay Wasiirkii hore ee Wasaarada Maaliyada Yuusuf Maxamed Cabdi. 8 total views, 8 views today
Hargeysa (Dawan)- Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa golaha ammaanka ee qarammada midoobay ku bogaadisey qaraarkii ay ku cusboonaysiiyeen cuno-qabatayntii hubka ee saarnayd dalka Soomaaliya 14kii bishan November. 6 total views, 6 views today
Hargaysa (Dawan): Wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa shalay qaabilay wefti balaadhan oo ka socday dawladda Holland iyo hay’adda qaramadda midoobay u qaabilsan cuntadda iyo beeraha ee FAO. 4 total views, 4 views today
Hargeysa- (Dawan)- Hanti dhawraha guud ee Somaliland, Axmed Yuusuf Dirrir ayaa sheegay in uu socdo baadhitaan ay ku hayaan wasaaraddaha arrimaha debadda iyo Maaliyadda, waxaanu xusay in baadhitaanka ay qayb ka yihiin Wasiiradda Dr. Sacad Cali Shire iyo Yuusuf Maxamed Cabdi oo hadda laga bedelay xilalka wasaaraddahaasi. 5 total views, 5 views […]
Ceerigaabo (Dawan) Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidada Somaliland mudane Cabdillaahi Cismaan Abokor ayaa ku dhawaaqay in sannadka 2019 ay dhameystirayaan dhismaha mashruuca jidka Ceerigaabo waxanu sidaa ka sheegay mar uu warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceerigaabo. 8 total views, 8 views today
Hargeysa (Dawan)- Xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka mid mudanayaash golaha wakiillada Somaliland ayaa Madaxweynaha Somaliland ugu baaqay inuu safarkiisa gobolada bari uu ku gaadho Degmada Badhan ee gobolka Badhan, waxaanu Madaxweynaha Illaahay ugu baryey inuu safarkiisa ku soo guuleeyo . 5 total views, 5 views today
Hargeysa (Dawan)- Dood adag oo dhex martay sadexda xisbi qaran ee Somaliland ayuu xisbiga KULMIYE ku soo bandhigay waxqabad muuqda oo aan la dafiri karin oo muddadii sannadka ahayd ee Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi talada dalka haysay ay dalka ka hir gelisay oo dhammaantood ah kuwo kor loogu qaaday arrimaha […]
Wajaale (Dawan) – Wasiirka Wasaaradda horumarinta beeraha, Axmed Muumin Seed iyo Agaasimihiisa guud Dr. Axmed Cali Maax, ayaa kormeer ku tegay mashruuca beeraha ee Banka Wajaale. Halkaasi oo ay ka socoto hawsha iyo kala hufidda Hadhuudh ka soo ga’ay beerahaas. 24 total views, no views today
Toddobaadka Caalamiga ah ee hal Abuurka ganacsiga iyo doorka shirkadaha dalka. Dahabshiil Group ayaa si ballaadhan uga qaybqaadatay toddobaadka caalamiga ah ee hal-abuurka ganacsiga oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Hargeysa. Toddobaadkan oo ay soo qabanqaabiyeen Hay’adda Shaqodoon, ayaa intii uu socday waxaa ka qaybgalay dhallinyaro leh halabuur […]
November 17, 2018, 6:44 am